UV / oyi Na-egbochi
Hip Nguzogide Band
Azụ & Lumbar
Azụ & Ubu
Nkwonkwo apata ụkwụ & nwa ehi
Nkwado Nwa Ehi
Nkwado apata ụkwụ
Na-abanye n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ezigbo nyocha ndị ahịa
Otu ụdị azụ na-akwado belt nke ama ama
site ha na 20-12-12
Enwere ihe ngosi mara mma di iche iche na China n’oge na-adịbeghị anya, nke ụmụ nwanyị nwanyị 30 na-asọ mpi n’otu uzo, nke na-ewetara ndị na-ege ntị ọmarịcha arụmọrụ ọha na eze, kamakwa na-ewetara ọtụtụ ngwaahịa nwere otu ụdị, dị ka mgbazi Zhang Yuqi. eriri na ọzụzụ. Dị ka anyị na al ...
Nghọtahie anọ gbasara squats
Dị iche iche mma nwere ụzọ dị iche iche. Ọ gaghị ekwe anyị omume ime otu ihe ahụ na mmemme ọkọlọtọ, mana anyị kwesịrị ịchọta nke ga-adịrị anyị mma. N'ihi na ụfọdụ omume na-ezighi ezi abụghị naanị maka anyị, kamakwa ọ na-emebi ahụ anyị. Ka m webata nnukwu nghọtahie anọ dị na squattin ...
Otu esi ahọrọ ikpere na-akwado nkwado sayensị
You na-enwe ahụ erughị ala na ikpere gị mgbe ị gbasịrị ogologo oge, ndị mụrụ gị na-emekwa mkpesa na-egbu mgbu ikpere mgbe ha mere agadi? Should kwesịrị ịzụta nkwado ikpere maka mmezi? Isiokwu a ga-ekerịta ụfọdụ ihe ọmụma bara uru banyere ikpere ikpere. Dị iche iche ikpere pad nwere dị iche iche f ...
Egwuregwu atọ kachasị adabara n'oge oyi
N'oge oge oyi, ọ bụrụ na ị na-ekwusi ike na mmega ahụ kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ọ bụghị naanị mezie qi qi, kamakwa ịkwalite ọrụ mgbochi nke anụ ahụ na akụkụ dị iche iche na ikike ahụ iji guzogide mpụga oyi. Ndị ọkachamara ahụ ike na-atụ aro na egwuregwu oge oyi kwesịrị ịdị jụụ ihe ...
Kedu ka ụmụaka si emega ahụ?
site ha na 20-11-28
Mgbe nwatakịrị tolitere, ọ bụghị naanị na ọ ga-eleba anya na nri ya, kamakwa na-emega ahụ ya nke ọma, iji mee ka ahụike nwata ahụ ka mma. Imega ahụ mgbe niile nwekwara ike ime ka nwa ahụ ghara ịlụso ya ọgụ. Ya mere, olee otu ụmụaka si emega ahụ? 1. I nwere ike ịhapụ ụmụ gị ka ha gbaa ọsọ ma ọ bụ gbaa bic ...
Kedu ka ndị egwuregwu NBA si chebe nkwonkwo ụkwụ ha
Ndị enyi na-amasị egwuregwu NBA maara na iji gosipụta nsonaazụ kacha mma na egwuregwu ahụ, ndị egwuregwu nwere usoro ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Ya mere, olee otu ha si echebe onwe ha pụọ ​​na mmerụ ahụ n'oge egwuregwu? Ka anyị hụ ka ha si echekwa nkwonkwo ụkwụ ha. 1. Kee bandeeji Jiri bandeeji puru iche iji kee gi ...
Ihe ọmụma banyere ịgba ígwè
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ịgba ịnyịnya ígwè nọ nwayọ na-apụta n’obodo ndị dị ka obere carbon, omume enyi na gburugburu ebe obibi na ahụike dị mma nke egwuregwu. Gba ígwè bụ ezigbo mmega ahụ ahụike, mana ọ bụghị naanị ịgba ịnyịnya siri ike, kamakwa attentionaa ntị na ọnọdụ ịgba ịnyịnya ziri ezi, ka ọ ghara imebi egwuregwu ...
Mmebi nke ahụ kpatara oke ịgba ọsọ
Na ndụ, mgbatị ahụ anyị na -eme nke ọma dị mma maka ahụike anyị. Agbanyeghị, mmega ahụ gabigara ókè na-emebi ahụ, yabụ anyị ga-echeta iwere oke kwesịrị ekwesị mgbe anyị na-emega ahụ. Ebe ọ bụ na oke ọnụọgụ nwere ike imebi ihe, ka anyị kwuo maka mmebi nke oke ọsọ ...
Otu esi egbochi mmerụ egwuregwu mgbe ị na-eme ski
Mgbe oge oyi rutere, ọtụtụ ndị na-eche na egwuregwu oge oyi ga-ebelata, mana nke a abụghị ikpe. Ski na-ewu ewu ugbu a. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ejiji, ya mere ọ na-adọta ọtụtụ mmadụ mgbe niile, mana n'otu oge ahụ, Ski bụ ihe egwuregwu dị oke egwu nke dị mfe mmerụ ahụ. Dị ka anyị a ...
Kedu ihe anyị nwere ike ime n'ụlọ n'oge ọrịa a
Ọrịa zuru ụwa ọnụ dị njọ ma nweela mmetụta dị ukwuu na ọrụ na ndụ anyị. Ọtụtụ mmadụ na-anọ n’èzí emechi n’ụlọ iji zere ịrịa nje a. Iji gbochie ọnụọgụ mmadụ, ọtụtụ ebe dịka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, nnukwu ụlọ ahịa, mgbatị, wdg. Nwoke ...
Kedu ka esi egbochi mmega ahụ?
N’ezie, maka ọtụtụ mmadụ, mgbatị ahụ ka mma, ọ ka mma, n’ihi na ọtụtụ mmadụ ka na-eru ogo ogo ije nwere ike imebi ahụike ha. 1. Enwela ụkpụrụ dị elu ma ọ bụ nwee oke ike: peoplefọdụ ndị na-eme ụkpụrụ nke aka ha oke elu, dị ka ịnabata maratho ...
Otu esi edozi egwuregwu
Anyị niile maara na mmega ahụ nwere ọtụtụ elele, yabụ ụdị mmega ahụ kwesịrị ekwesị? Ọ ga - ekwe omume ịmega naanị site na ịga ije ma ọ bụ ije ije ngwa ngwa? Taa, m ga-ekwu maka okwu abụọ a, ma webata otu esi egbochi oke mgbatị. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, egwuregwu nwere ike kere ụzọ atọ: The f ...